Dhakhtar Ugu Hanjabay Dad Inuu Fayruska Corona Qaadsiin Doono – Banaadir weyne
Dhakhtar sare oo ka howlgala Gobolka Sörmland ayaa lagu soo eedeeyey dacwad la xiriirta isku day waxyeelayn xooggan. Ninkan ayaa isniintii ruumaanka la dhigay, hase yeeshee la sii daayay muddo dabadeed.
Dhakhtarkan sare ayaa lagu tuhunsan yahay inuu fiidnimadii axaddii ugu hanjabay dad waddada marayay inuu qabo Fayruska Corona oo uu candhuuf iyo qufac isugu dari doono.
Ciidanka ammaanka ayay u suurtagashay inay warreysi la yeeshaan ninkan kolkii ay sakhraddii ka ba’day.
Laanta Idaacadda ee P4 Sörmland oo la hadashay hoggaanka caafimaadka ee gobolka, ayaa ogaatay in dhakhtarka sare shaqadii laga xayiray muddada ay baarista ciidanka ammaanku socoto, hase yeeshee ka gaabsaday wax intaa ka badan inuu hoggaanka gobolku ka faalloodo.
Marie Engman ahna Guddoomiyaha Ururka Dhakhaatiirta ee Gobolka Sörmland oo Hoggaanka Gobolku ku war geliyay dhacdadan ayaa sheegtay mar ay wareysi siisay Per Thyrén oo ka howlgala Laanta P4 Sörmland:
– Waa dhacdo nasiib darro ah oo aan loo dul qaadan karin cid walba oo falka noocan ah ku kacda, sida ay sheegtay. Iyadoo hadalkeedii sii wadatana sheegtay inay Hoggaanka Gobolka ka filayso sidii looga gun gaari lahaa haddii ay jirto sabab ka dambeysa ee loo baahan yahay in laga caawiyo shakhsiga falkan ku tallaabsaday.
– Haddii uu shakhsigani u baahan yahay taageero, ama uu xanuun kale ka dambeeyo falkan lagu kacay, sida ay sheegtay Marie Engman. – Radio Sweden, Somali Section